အနှစ်တစ်ထောင်နှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဤသည်ဧဝံဂေလိတရားနှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအပေါ် ERLC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှခရီးစဉ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါသည်. အောက်တွင်ကြောင်းသတင်းစကားကိုမှလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီညနေ, ငါအနှစ်တစ်ထောင်နှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဟုမေးခဲ့ကြရတယ်. ထိုအခါငါကဒီမှာရပ်နေနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်၌စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဦးတည်သည်ဤအံ့သြဖွယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစေခံရန်အခွင့်ထူးခံစားရ.
တစ်ရက်ပ်အဖြစ်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား၏အနှစ်တစ်ထောင်နဲ့လူအများကြီးနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေပွဲတွေအများကြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ထိုအခါငါဂီတကယ့်ကိုစညျးလုံးကလူတစ်လမ်းရှိကြောင်းကိုမြင်ရပါတယ်. လူမျိုး၏တစ်ဦးတည်းသာလူဦးရေဆိုင်ရာအရပ်၌အချို့သောဖျော်ဖြေပွဲရှိပါတယ်: ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအားလုံးကိုဘောလုံးအသင်း moms နှင့်အဖြူဆင်ခြေဖုံးဆယ်ကျော်သက်င်, သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမြို့ပြကောလိပ်ကျောင်းသား, khakis ဝတ်ဆင်အားလုံးတောင်ပိုင်းဗတ်တိဇံဆရာသင်းအုပ်ဆရာသို့မဟုတ် (ဒါကို, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနောက်ဆုံးတယောက်). လူငယ်နှင့်အဟောင်းပါကြောင်းဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်မှာသို့သော်အများအပြားလည်းရှိပါတယ်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်, နှင့်များစွာသောအခြားအုပ်စုများ. ထိုသို့စောငျ့ရှောကျတဲ့သူကလူမကြာခဏမတူကွဲပြားမှုမှာအံ့ဩခြင်း, ငါကအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ကယ့်ကိုကောင်းသောအရာရဲ့စဉ်းစား.
ငါကအေးမြနဲ့အံ့သြဖွယ်င်ထင်ပါသလဲနေစဉ်, ငါကဖြစ်တချို့ကိုထုတ်လုပ်သကဲ့သို့အထင်ကြီးရဲ့စဉ်းစားကြဘူး. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးဤကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေပွဲရှိပါတယ်. လူအမျိုးမျိုးရတဲ့အကြောင်းထူးခြားသောအတူတကွစုရုံးဖို့ဘာမှမရှိဘူးင်. ဒါဟာဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ပျက်, သို့မဟုတ်အားကစားဖြစ်ရပ်များ, စသည်တို့ကို. အနုပညာရှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်အားကစားအဖွဲ့သည်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်တဲ့အခါ, ထိုအရပ်၌လူဂီတသို့မဟုတ်အဖွဲ့အဘို့မိမိတို့မေတ္တာအားဖြင့်အတူတူဆောင်ခဲ့ကြ၏နေကြတယ်. အဲဒီလူတွေတကယ်ပေါင်းစည်းခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သူတို့ကပင်တကယ်တလျှောက်ရရန်မလိုပါ. သူတို့ကပဲနာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အသီးအသီးအခြားသည်းခံရန်ရှိသည်.
ဒါကကျနော်တို့ပြီးနောက်နေစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်သင့်မြတ်ရေး၏မျိုးမဟုတ်ပါဘူး. စည်းလုံးညီညွတ်မှုမျိုးကြာရှည်ခံသည်မဟုတ်. ဒါဟာဘာမှမထုတ်လုပ်ပါဘူး. ဤလူမျိုးသည်အမှန်တကယ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထမ်းဆောင်ကြသည်မဟုတ်. ထိုသို့တကယ်ထိုနည်းတူခရစ်တော်နှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိတရား၏ဘုန်းအသရေမှထောက်ပြမပါဘူး.
ကျွန်တော်တို့ပြီးနောက်င်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမျိုးကိုပိုပြီးကြာရှည်ခံသည်နှင့်ပိုပြီး substantial- ပိုပြီးမေတ္တာရှင်.
... သူသညျယရှေုအမြိုးအတှကျသေဆုံးမယ်လို့ပရောဖက်ပြု, မမြိုးအတှကျသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအရပ်ရပ်ကွဲပြားရကြ၏သောဘုရားသခငျ၏တစျခုအမြိုးသားအသို့စုရုံးရန်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးရည်မှန်းချက်ပဲအတူတူခန်း၌အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကလူဆိုတော့သည်မဟုတ်. Jay-Z ကလုပျနိုငျ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကယရှေုပြီးသားပြည့်စုံနှင့်သောသို့လူကိုခေါ်တော်မူပြီသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့လူတွေရှိတန်ဆာမွေ့လျော်ခြင်းနှင့်သူတို့သွားနေရာတိုင်းကကြွေးကြော်ချင်. ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှမျိုးဆက်သည်လိုခငျြ. သို့သော်ထိုသို့သာဧဝံဂေလိတရားကိုတဆင့်လာနိုငျ.
အကူးအပြောင်း: အဆိုပါနှစ်တစ်ထောင်မျိုးဆက် 2000 ပြည့်နှစ်မှသင်တန်း၏အစောပိုင်း 80s တှငျမှေးဖှားသူမြားဖွစျသညျ. အကြှနျုပျတို့သ (အနှစ်တစ်ထောင်) ပထမဦးဆုံးကမှာကောင်းပါတယ်, စည်းလုံးညီညွတ်မှုပိုမိုလွယ်ကူကြင်နာ. သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကြောင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းအကြောင်း, ပိုပြီးသိသိသာသာ, နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုပိုမိုခက်ခဲမျိုးကို?
သငျသညျကိုယ့်ကိုကိုယ်တူနှစ်တစ်ထောင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းမှဆက်လက်နိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းများစဉ်းစားရန်လိုခငျြ. ထိုအသင်တစ်ဦးနှစ်တစ်ထောင်မနေလျှင် (ခေါ်သငျသညျဟောင်းနေ), ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းသင်ဤကြီးမားသောသမ္မာကျမ်းရူပါရုံကိုမှအနှစ်တစ်ထောင်ခေါ်ခြင်းဘယ်လိုမှတ်ချက်ယူနိုင်ပါသည်. ဒါကဓမ္မဆရာများအဘို့အတတ်, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်, မိဘများ, မိတ်ဆွေများ, စသည်တို့ကို.
လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့်ဤမျိုးဆက်စဉ်းစားရန်အချို့သောစိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်. ဒါဟာ ပြန်. ခံရဖို့နှစ်ဦးစလုံးကလူခေါ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်အခြားသူများဖုန်းခေါ်သူတို့ကိုအားပေးရလွယ်ကူမယ့်. ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒီမှအနှစ်တစ်ထောင်တောင်းဆိုတွင်ရှိသည်ထင်သုံးထူးခြားသောအတားအဆီးများမှာ:
သူတို့တခါထက်သင်တန်း၏အမှုအရာသည်ဤတိုင်းပြည်တွင်ယခုအလွန်ကွဲပြားခြားနား. အကြှနျုပျ၏အဖိုးငါမယုံနိုငျသောပုံပြင်များပြောသည်,ငါ့အဘသည်အရပ်ဘက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းကန့်ကွက်, ငါ့အမိ​​ခင်တစ်ဦး child.Those အဖြစ်ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းကိုငြင်းပယ်ခံရ Remembering ၏ပုံပြင်များအတော်လေးငါ၏အတှေ့အကွုံမြားမဟုတ်ငါ့ကိုပြောထားပါသည်. ဥပဒေရေးရာအသားအရောင်ခွဲခြားမဟုတ်တော့တဲ့အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါပစ္စည်းပစ္စယပြောင်းလဲသွားပြီ.
ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ရောက်နေသည်ဟုယူဆ, အရာမရှိတော့ယှဉ်ပြိုင်ဆက်ဆံရေးဟာသက်ဆိုင်ရာစကားလက်ဆုံစေသည်. တစျခုမှာရက်ပ်ကပြောပါတယ်, "အင်တာနက်ကိုမလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိတယ်. ငါအဘို့အ-သားစဉ်မြေးဆက်မပြောမယ်လို့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသာ-ကြောင့်ခဲ့ပါတယ်ငါးသားစဉ်မြေးဆက်လွန်ခဲ့တဲ့တူဖြစ်ကောင်းရဲ့ ... လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်. yeah, ငါးသားစဉ်မြေးဆက်လွန်ခဲ့တဲ့တူ. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုကျော်ခဲ့. ဒါဟာပေါ်ကိုင်ပြီးအပေါ်စောင့်ရှောက်သောအဟောင်းကလူရဲ့ ... "
ဤသည်အများအပြားအနှစ်တစ်ထောင်ထင်အဘယ်သို့သောအ ... ။ "ကျနော်တို့ Post-လူမျိုးရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာယခုင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွက် interracial လက်ထပ်ထိမ်းမြားအများကြီးရှိပါတယ်. ထိုအခါသင်တန်းကျွန်တော်တစ်ဦးလူမည်းသမ္မတတိုပြုပါ. ဒါဟာအားလုံးအတိတ်ပါပဲ။ "
ဝမ်းနည်းစရာ, အချို့သောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအနှစ်တစ်ထောင်အတိတ်သားစဉ်မြေးဆက်ထက်တန်းတူရေးဖို့ပိုပြီးနှုတ်ခမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးမပြခဲ့ကြ, ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများကဲ့သို့ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုယ့်စိတ်စွန်းကွက်အဖြစ်အခြေခံအားဖြင့်နေဆဲပါပဲ. သေး, ကျနော်တို့ Post-လူမျိုးရေးထင်ပါတယ်, အန္တရာယ်များတဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်.
ဒါပေါ့, ကိုပင်ဥက္ကလာဟိုးမားရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားအကြားလူမျိုးရေးခွဲခြားဖူးပါတယ်တူမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအသက်ရှင်လျက်နှင့်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကြောင်းပြသ. သို့သော်ဝမ်းနည်းစွာ, ထိုသို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖွင့်မဟုတ်လျှင်, ကျွန်တော်တို့က၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းပယ်.
လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုမကြာခဏပိုပြီးသိမ်မွေ့သည်, ဒါပေမဲ့ကလျော့နည်းဆိုးယုတ်သောင့်မဆိုလိုပါဘူး. ဒါဟာကိုယ့်ရှေ့မှာထက်ပို sneaky င်ဆိုလိုသည်. ထိုစစ်တိုက်ဖို့ကစားမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
လူမှုမီဒီယာတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆုကြေးဇူးဖွစျသညျ. ကျွန်တော်ပင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစိန်ခေါ်မှုမြင်ကြနှ​​င့် U.S အတွက်မကြာသေးမီလူမျိုးရေးပြဿနာများကို၏အလငျး၌လူစည်းရုံးပါတယ်. ဒါပေမယ့်ငါ့အမျိုးဆက်ကိုအလွယ်တကူကရိုးရိုးလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ကောင်းသောအရာကိုမျှဝေဖို့လုံလောက်တဲ့ရဲ့စဉ်းစား၏ထောင်ချောက်ထဲသို့ကျနိုင်. အချို့လူများကဒီလျှော့-tivism မခေါ်:လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ Retweet မှ, တရားဟောဆရာ '' ကိုးကား, ဤအမှုကိစ္စရပ်များနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ, ထိုအရပ်၌ရပ်တန့်ဖို့.
ဒါကလုံလောက်စွာမရင့်! ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ကြောင်းထက်ကျော်လွန်အရေးယူရန်ရှိသည်. ဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများအကြား Talking အလွန်ကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်မလောက်မယ့်. နှင့်အခြားတိုင်းရင်းသားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာမိတ်ရ​​ှိခြင်းသည်ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေလုံလောက်မယ့်.
နှစ်တစ်ထောင်ခရစ်ယာန်များအတွက်, ကျွန်တော်တခါခဲ့တဲ့အဖြစ်ကမျြးစာကိုလေးစားမသည်အဘယ်မှာရှိတစျနေ့တှငျနထေိုငျ. ထိုအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်, ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုကျဉ်းမြောင်းသည်. ဒေါက်တာခုနှစ်တွင်. ရှငျဘုရငျ၏နေ့က, လူကမျြးစာအမှနျတရားကိုတုန့်ပြန်, ဒါပေမဲ့မငါတို့အတွက်. ဒါဟာ Divide င်. သူတို့ကဘာကိုတကယ်လိုအပ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြောင်းငြင်း, ပိုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်သတင်းစကား. အဘယ်သို့သတင်းစကားတစ်ခုဆို ay တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်အောင်ထင်သည်?
ကျနော်တို့ကပိုခရစ်ယာန်ဧဝံဂေလိတရားကိုကွှေးကျွောခွငျးမလိုအပ်ပါဘူး, များစွာသောသညျဟုထငျ. သူတို့ကို, ဧဝံဂေလိတရားကိုကွှေးကျွောခွငျးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမပါလျှင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှခရစ်ယာန်လှုပ်ရှားမှုဟူ.လည်းဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကျိန်းသေကဟောပြောခြင်းထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခွငျးကိုမစွန့်နိုင်, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုသာငါအထက်တွင်အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအလင်းဒင်္စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမျိုးရှိသည်လိမ့်မယ်.
ကောင်းစွာ, သူတို့အားငါကျနော်တို့လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှအနှစ်တစ်ထောင်တောင်းဆိုအတူရင်ဆိုင်ရထင်သုံးအတားအဆီးများမှာ. ဒါကြောင့်, ထို့နောက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း? ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုခေါင်းဆောင်များသို့မဟုတ်အသင်းတော်များသို့မဟုတ်ပင်မိဘများ၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကို အကယ်., ငါတို့သည်အဘယ်သို့ငါ့အမျိုးဆက်၏ဘဝ၌ဤဖြေရှင်းရန်ပါဘူး?
ဤတွင်သုံးရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်များမှာ. ငါသည်ဤလိပ်စာများကိုအသီးအသီးအထက်ပါပြဿနာတွေကိုအားလုံးသုံးထင်. ထိုအခါငါအိမ်ပြန်နှိပ်ချင်တဲ့အဓိကအရာသာဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြီးနောက်င်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမျိုးထုတ်လုပ်ကြောင်း.
ဖြေရှင်းချက် #1: ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောရ
ကိုယ့်အသစ်တစ်ခုကိုခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုစိုက်ကူညီပေးဖို့အတ္တလန်တာသ​​ို့ပြောင်းရွှေ့င်, ဒါပေမယ့်ရှေ့၌ငါ D.C တစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်. လေးနှစ်အဲဒီမှာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး. ထိုအရပ်၌ငါ၏အချိန်အတောအတွင်း, ငါအသင်းတော်ကိုမတူကွဲပြားမှုအတွက်လွန်စွာကြီးထွားသည်ကိုမြင်, ထိုသို့ကြည့်ရှုရန်လှပသောအရာကြီး. ပို. ပို. အနက်ရောင်အဖွဲ့ဝင်များရှိခဲ့သည်, တရုတ်အဖွဲ့ဝင်များ, အဟောင်းတွေအဖွဲ့ဝင်, နှင့်အငယ်အဖွဲ့ဝင်. ဘုရားသခင်ကချွေတာခဲ့လူစုဒီအရူးမတူကွဲပြားမှုရှိရှိရာနှစ်စောင့်ကြည့်ဖို့ကြီး.
ဒါဟာစုံလင်သောမတူကွဲပြားမဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်လှပတဲ့ခဲ့သည်. ထိုအခါငါကဖြစ်ပျက်ထင်, အသင်းတော်ကိုလူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးကွောငျ့မ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရဲ့အလွန်သတင်းစကားအကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးသောကြောင့်,.
သို့သျောလညျးငါ, ငါသည်မြေကြီးကနေချီပါ၏အခါ,, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှလူအပေါင်းတို့ဆှဲမညျ
သူချီနေသည့်အခါယေရှုဒီလိုပြောခဲ့တယ်, သူကကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံလိုကျသောအခါအဓိပ်ပာယျ, သူသညျမိမိအားလူအပေါင်းတို့ဆွဲလိမ့်မယ်. သူကယောက်ျားအချို့ကိုမျိုးမပြောခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လူအပေါငျးတို့. သူကဒီမှာခွဲခြားမှုမထားဘူး. တမန်တော်ယောဟန်ကအားလုံး "ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ,"ဒါကြောင့်တိုင်းတစ်ခုတည်းပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလိုပါ, ဒါပေမဲ့လူအပေါင်းတို့အုပ်စုတွေ. ရုံဣသရလေထက်ပို, ဒါပေမဲ့အားလုံးအခြားတပါးအမျိုးသားတို့အဖြစ်ကောင်းစွာ. ဘုရားသခင့မတူကွဲပြားသောလူမျိုးကဖန်တီး, ယရှေုသညျကိုယ်တော်တိုင်မှမတူကွဲပြားသောလူမျိုးဆွဲရန်သေဆုံးခဲ့.
ဒီကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု၏စိတ်နှလုံးသည်. ကျွန်တော်တို့ကိုခြားနားစေသောအရာဒုစရိုက်ဖြစ်၏. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်လူမျိုးရေးတင်းမာမှုနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြာ၏အမြစ်ဒုစရိုက်ဖြစ်၏. ထိုအခရစ်တော်ပြီးသားအပြစ်တရားလူအပေါင်းတို့အဘို့အသေခံခြင်းထိုးနှက်တျောမူပွီ. ကျနော်တို့က message ကိုကြားပြောစေခြင်းရန်ရှိသည်.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ကျနော်တို့စည်းလုံးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေမယ့်အစားယရှေုသညျပြီးသားဖန်တီးသည့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလက်ခံကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်. ဖွင့်ပြချက်5ယရှေုသညျကပြောပါတယ်, " ... တမျိုးကနေဘုရားသခငျသညျလူတို့အဘို့ဝယ်ယူ, ဘာသာစကား, လူထု, အမျိုး။ "ဒါဟာအားလုံးတစ်လျှောက်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ခဲ့, ငါတို့သည်လည်းပြောပြရ!
ဧဝံဂေလိတရားကိုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားသဘောပေါက်ထက်အများကြီးနက်ရှိုင်းတတ်. ဧဖက်ခုနှစ်တွင် 4, ဒီနက်ရှိုင်းသောစည်းလုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါလုကဆွေးနွေးပွဲ. သူကစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်အားလုံးအချိန်ကာလမှတ်ချက် "ပါတကား။ "
တကိုယ်တည်းနှင့်စိတ်တဝိညာဉ်တည်း-ရုံသင်သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်သခင်တပါးနှငျ့ဆိုငျသောတဦးတည်းမြော်လင့်ဟုခေါ်ကြသည်ကဲ့သို့ရှိ၏, တဦးတည်းယုံကြည်ခြင်းအား, တဦးတည်းဗတ္တိဇံ, လူအပေါင်းတို့၏တဦးတည်းအဘတည်းဟူသောဘုရားသခင်သည်, အားလုံးကျော်အပေါင်းတို့နှင့်တဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအတွက်သောသူသည်. ဧဖက် 4:4-6
ကျနော်တို့အနှစ်တစ်ထောင်သည်အခြားတူညီသောဧဝံဂေလိတရားကိုလူတိုင်းမလိုအပ်. ထိုသို့စစ်မှန်တဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုထုတ်လုပ်. ဒါကြောင့်, ကယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်ကကွှေးကျွောခွငျးကိုဆက်လက်ပါစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကြားချင်ပါဘူးလျှင်ပင်. ထိုကျယ်ပြန့်ယဉ်ကျေးမှု၌, ကျနော်တို့ဥပဒေမြင်ချင်, ကျွန်တော်တရားမျှတမှုကိုမြင်ချင်. ဒါပေမဲ့လူအပေါင်းတို့၏တရားသူကြီးပြီးသားဆင်းပေးအပ်ခဲ့ရာအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မမှတ်စေနှင့်.
သာဝငျကမျြးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီလိုမျိုးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. အိုကေ, ဒါကြောင့်အခြားအဘယျသို့ဖြေရှင်းချက်ရုံကွှေးကျွောခွငျးကျော်လွန်ရှိပါတယ်?
ဖြေရှင်းချက် #2: ဧဝံဂေလိတရားကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နားလည်မှုအဘို့စစ်တိုက်ခြင်း
ယောဟနျသမှာကြည့်ပါ 13:34-35. ငါသည်သင်တို့ကိုပေး "အသစ် command ကို: အချင်းချင်းချစ်. ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်အဖြစ်, ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရမည်. ဒီအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုငါ့တပည့ဖြစ်ကြောင်းသိရကြလိမ့်မည်, သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင်။ "
ဒါပေမဲ့ဒီဘာကိုဆိုလိုတာလဲ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဒီကယ့်ကိုတူပါဘူး? သူနှင့် ပတ်သက်. ဤနေရာတွင်ပြောသွားဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်စုံတစ်ယောက်ကအဘို့သန့်ရှင်းသောချစ်ခင်နှင့်၎င်းတို့၏ကောင်းသောဖို့ကိုယျကြိုးစှနျ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အဘို့အသောသန့်ရှင်းသောချစ်ခင်ရှိသင့်. ကျနော်တို့ရဲ့အသီးအသီးအခြားကောင်းသောမှကျူးလွန်ရပါမည်. ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပိုပြီးခရစ်တော်သိတချင်သင့်တယ်, ပိုပြီးကြီးထွား, နှင့်လန်းဖို့. ကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူရှိတိုင်းအပြန်အလှန်မေတ္တာအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရပါမည်.
သို့သော်သခင်ယေရှုပဲအချင်းချင်းချစ်မပြောပါဘူး; သူငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရကြပုံကိုသတ်မှတ်ပါတယ်. အဆိုပါပုံကို: သူကကျွန်တော်တို့ကိုခစျြ၏လိုပဲ. ဝိုး! သူကသည်ငါတို့အဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်, ကြှနျုပျတို့အတှကျအပွစျရှိကမ္ဘာ့အကြံ့ကြံ့ခံ, ကိုသူ၏အသက်တာချ. ထိုအခါသူကကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူလမ်းအတွက်အသီးအသီးအခြားချစ်ရမည်ပြောပါတယ်. ထိုလူကိုငါတို့သညျတပညျ့တျောတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရကြလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုဖွင့်.
အခြားနည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများမှာသူ့ဟာသူထွက် fleshes ဤမတ်ေတာတယောက်. ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ကျန်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာတူအရာပေါ်အနည်းငယ်ဒါပေမယ့်ဇာတိပကတိ၏အတတ်၏.
ဂလာတိ 6:2 – အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရဲ့ထမ်းရွက်
ဧဖက် 4:32 – အချင်းချင်းစာနာမှု Be
ဖိလိပ္ပိ 2:13 – ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက် သာ. ကောင်း၏အခြားသူများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား
ဟေဗြဲ 3:13 – နေ့စဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အားပေး
ဂျိမ်း 5:16 – အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အဘို့ဆုတောင်းကြလော့
1 ပတေရုသ 3:8 – ညီအစ်ကိုကဲ့သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
ဤတွင်အရာပါပဲ, ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်တာပေါ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိရန်ရှိသည်. ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနားလည်ရန်ရှိသည်. အဘယ်သို့ငါငါ့အစ်ကိုရဲ့ထမ်းရွက်နိုင်, ငါသည်သူ၏ဝန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိကြပါလျှင်? ဘယ်လိုငါသည်သင်တို့ဆီသို့ဦးတည်စာနာမှုရှိနိုင်ပါသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုအပေါ်ချိန်သောဖိအားမသိကြပါလျှင်? အသီးအသီးအခြားနားလည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစွာအချင်းချင်းချစ်ကူညီပေးသည်. (ပြန်ဆို)
နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့, ငါ white.We ဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောသူသည်ငါ့ဥစ္စာ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတဦးနဲ့စကားလက်ဆုံယခုအချိန်တွင်တစ်မုရှိတည်းညီအစ်ကိုချစ်ခြင်းအမျိုးအစားရှိခြင်းခဲ့ကြသည်ရှိခြင်းခဲ့သည်. ထိုမင်းသည်ငါ့အားပြောဆို၏, "ငါ့ကိုရန်, သင်ရုံငါ့မိတ်ဆွေခရီးစဉ်ပါပဲ. ငါပင်အနက်ရောင်အဖြစ်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြပါဘူး။ "အခုငါသူသည်ငါ့ကိုမှဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရာတန်ဖိုးထား. သူကကျွန်မကိုသူ့အအခြားမိတ်ဆွေမည်သည့်ထက်မဆိုလျော့နည်းကိုချစ်သွားမခံခဲ့ရ. သို့သော်အခြားဘက်မှာ, ငါကတခြားသူတွေကိုကြည့်ရှုရန်တစ်ဦးအကူအညီမရပါလမ်းဖွင့်စဉ်းစား. ဒါဟာငါ့အတစ်ခုတည်းမိတ်ဆွေတယောက်ဟုအကြှနျုပျကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့, "သင့်ဂျော်နီကဲ့သို့သင်တို့မြင်ရသိ. ငါပင်သင်တစ်ခုတည်းပါပဲကြောင်းသတိထားမိမှာမဟုတ်ကြပါဘူး။ "ကောင်းပြီ, သူတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါသည်. နှင့်သူ၏ရုန်းကန်မှုများအများအပြား, အလိုဆန္ဒများ, နှင့်စိန်ခေါ်မှုများသူတစ်ခုတည်းရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့သွားကြသည်.
ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့ထူထပ် ပတ်သက်. အဓိကအားဖြင့်စဉ်းစားရန်မသူကအဲဒီမှာမယ့်တူ me- မှဒါပေမယ့်လည်းဟန်ဆောင်ဖို့မပြောသွားတိုင်းအချိန်ကိုငါ့ friend- အားပေးခဲ့တယ်. ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်, ထိုသို့ငါ့အသက်ကိုထိခိုက်ပါဘူး.
1. ငါကအနက်ရောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသောကြောင့်. ငါကြိုက်တယ်အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း. တဖန်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဤလမ်းကိုဖန်ဆင်း.
2. အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း, သို့မဟုတ်တစ် mom,, သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်း.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ၌များစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကိုစဉ်းစားရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ထိုဒဏ်ငွေင်. ဒါပေမယ့်ကျင့်သောကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူများရှိပါတယ်. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နှင့်ငါ့အနက်ရောင်အတှေ့အကွုံအဘို့ကိုသာစကားပွောနိုငျ. ငါလူတိုင်းအဘို့ကိုမပွောနိုငျ.
ငါတစ်ဦးအပိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရှိတယ်, များစွာသောအနက်ရောင်ကလူ, သယ်ရန်ရှိသည်. ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းဖိနှိပ်သမိုင်း သိ. ၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးသယ်: လူမည်းအပြည့်အဝကလူစဉ်းစားမရခဲ့သည်က, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တူပိုင်ဆိုင်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးအပေါ်ကိန်းဂဏန်းများအချို့ကိုအနက်ရောင်လူ, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆဲတည်ရှိ သိ., နှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိသူဖြစ်ခြင်းတခါတရံ.
အမှုအရာငါ့အကွောငျးယူဆခဲ့ကြရသောအခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပွီ(စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်) ့အသွင်အပြင်အပေါ်အခြေခံပြီး. အများစုကအခါသမယ, ဒါကြောင့်ငါကပြစ်မှုဆိုင်ရာ whenI ကြောင်းကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်တယ်ယူဆခဲ့ရဲ့. ငါစကားမပြောနိုင်သောနှင့်ပညာမတတ်တာကယူဆခဲ့ရဲ့အများစုကအခါသမယ. ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ၏အဖြူရွယ်တူချင်းမှယုတ်ညံ့တာပါကြောင်းသို့မဟုတ်ငါအဖြစ်မကောငျးတာကယူဆခဲ့ရဲ့အများစုကအခါသမယ. ငါ့ကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရာ၌ခန့်ထားပြီထင်သောလူ. ဆိုးသောလမ်းသို့အကြှနျုပျ၏ချစ်ရသူကိုကိုးကားလူဖော်ပြခြင်းမ. ကြားနာလူဆိုသည်ကားလိုပဲ, "သင်၏နှမကို kinda တော်တော်လေးဖြစ်ပါသည်, အနက်ရောင်မိန်းကလေးငါဆိုလို။ "အနက်ရောင်လျော့နည်းလှပသောပါလျှင်အမျှ. ဘဝမှာနှင့်လူအမြား၏ဘဝအသက်တာ၌ဤအမှုပုံစံများရှိပါတယ်. ငါသည်ငါ၏သားနှင့်အတူဟောပြောချက်ရှိသည်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်, ငါ့အဖေငါနှင့်အတူပြုကြ၏ရုံနဲ့တူ, သတိပြုရကြမည်ဖို့သူ့ကိုသတိပေးသူကအနက်ရောင်ရဲ့လို့သူ့ကိုကြိုက်မည်မဟုတ်သူတွေကိုရှိပါတယ်. ထိုသို့ငါသယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်သောတစ်ဦးအပိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးသည်.
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုမ? အဘယ်ကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤအမှုအလုံးစုံကိုပြောပြနေပါတယ်? က command ကိုကြောင့်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျထူးခြားတဲ့လမ်း၌သင်တို့၏ mom, ကိုချစ်ရုံနဲ့တူ, နှင့်သင့်အကွီးအကဲမြား, ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း-ကံကလူ, သငျသညျထူးခြားသောနည်းလမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအပေါ်ကိုချစ်ရမည်. ကျနော်တို့ထူးခြားသောပျော်ရွှင်မှုများ, ဝန်, နှင့်အတွေ့အကြုံများ, သင်သည်သူတို့၏ထူးခြားသောအတှေ့အကွုံပယ်ချသို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုလျှင်သင်ကောင်းစွာအခြားသူများကိုမချစ်နိုင်.
ကျွန်မတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပူးပေါင်းခဲ့သူတစ်ဦးတရုတ်အစ်မမှပြောနေတာသတိရ. သူမသည်သာအချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့အပြည်နယ်များရှိခဲ့, သူတရားဒေသနာနှင့်အတူသူမ၏အတှေ့အကွုံမြားအကွောငျးပွောဆိုသောအဖြစ်, သူမရဲ့နောက်သို့လိုက်ရန်အဘို့အကခဲ့ပုံကိုခက်ခဲရှင်းပြခဲ့သည်. ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမဟုတ်ရင်ကစဉ်းစားခဲ့ကြပေသည်ဘယ်တော့မှ. ဒါဟာလုံးဝကျနော်တို့အသင်းတော်၌သူမ၏တူညီအစ်မတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကကြည့်ရှုအားပေးရာလမ်းကိုပြောင်းလဲသွား, ထိုသို့သူတို့ကိုမချစ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်အကြှနျုပျကိုကကူညီပေးခဲ့.
သာဧဝံဂေလိတရားကိုယဇ်ပူဇော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ဒါကြောင့်, ငါတို့အတွက်ကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပြန်သညျယရှေုကိုသွားဖို့လိုအပ်. ဒါဟာခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်, သောငါ၏နောက်ဆုံးအချက်မှအကြှနျုပျကိုဆောင်တတ်၏.
ဖြေရှင်းချက် #3: ဒါဟာလွယ်ကူင်မယူဆပါနဲ့
မတူကွဲပြားခြင်းဧဝံဂေလိတရားကိုဂုဏ်အသရေနှင့်သစ္စာကိုပြသ. တဲ့အခါမှာတစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းလာ, သူတို့ထဲမှာမမြင်ရပါဘူးကမ္ဘာ့ကြောင့်သူတို့ကိုဧဝံဂေလိတရားကို၏ဘုန်းအသရေ၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းပေးသည်မတူကွဲပြားမှု၏မတူကွဲပြားမှု-တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကြည့်ပါ. ကျမ်းစာ၌ပါသောအာရုံတစျခုအုပ်စုကသခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုခေါ်သူမည်သူမဆိုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်-မခံကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူနှင့်ဒေသခံတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြသနိုင်မယ့်အခါလှပသောဖွင့်.
မတူကွဲပြားခြင်းလှပတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်; ဒါပေမဲ့ကလွယ်ကူမယ့်. ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်-ပင်လူတူမျိုးနွယ်စု၏မှန်လျှင်, အသက်အရွယ်, ကျွန်တော်တို့အပြစ်များသောသူနေသောကြောင့်, background- ကိစ္စများရှိပါတယ်. သို့သော်မတူကွဲပြားမှု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောကိစ္စများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံကိုရောက်စေ, အတှေ့အကွုံ, presuppositions, ဘက်လိုက်မှု, နှင့်ခရီးဆောင်အိတ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူတလျှောက်. တစ်ခါတစ်ရံအကပဋိပက္ခဖန်တီး.
ကျမ်းစာ၌ပါကဤပဋိပက္ခ၏သတိမထားမိသည်မဟုတ်. တောင်မှအစောပိုင်းအသင်းတော်၌, လူမျိုးရေးလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏ (တမန်တော်တှငျမှတျတမျးတငျထားအဖြစ်). ဒါကြောင့်, က hard ဖွစျလိမျ့မညျကတည်းက, ဒီနေရာမှာသူတို့အအခက်အခဲများအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လိုအဘို့အနည်းငယ်ကျပန်းအကြံပေးချက်များများမှာ:
သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုမူလတန်းမဟုတ်. နားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာကြလော့, သို့သော်သာမန်အားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်. ငါနောက်ကျော Philly ၌ရှိ၏သောအခါငါနေတဲ့အချိန်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်, ပါမောက္ခတစ်ဦးအမြဲကွဲပြားခြားနားငါ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါ. သူကတစ်ဦးနှင့်အတူအခြားကျောင်းသားများကိုနှုတ်ဆက်မယ်လို့, "မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ,"သို့မဟုတ်, "သင်မြင်ရဖို့ကောင်းတယ်။ " ဒါပေမယ့်သူကငါနှင့်ရုတ်တရက်ဆိုအပေါငျးတို့သမြင်ရမယ်လို့, "ဘာခွေးကိုတက်မယ့်?"သို့မဟုတ်" အဘယျသို့အကြှနျုပျ၏လူကိုသွားမယ့်?"
တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ, အသက်အရွယ်အုပ်စုများ, စသည်တို့ကို. တစ်ဦးချင်းစီ၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်. ပြည်သူ့အတှေ့အကွုံကွဲပြားခြားနား. တချို့ကကျပုံစံရယ်စရာနှင့်အန္တရာယ်ကင်းများမှာ, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေကိုထိုးစစ်များမှာ. တစ်ဦးချင်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကိုသိရန် Get.
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသင်တို့ကဲ့သို့မကြည့်ဘူးသောသူတို့နှငျ့အတူဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်. သာသငျသညျအမြားဆုံးသဘာဝနှင့်ချိတ်ဆက်မယ်လို့ရှေးရှေးနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့သွေးဆောင်မှုကို Fight. အသင်းတော်ကိုပြီးနောက်, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကွဲပြားနေသောလူတို့နှင့်အတူစကားပြော. မတစ်ဦးတာဝန်ကျတဲ့အဖြစ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပဲပိုပြီးသင်တို့ကဲ့သို့နေသောသူတို့ကိုလူကဲ့သို့ကိုယ်ခန္ဓာမှလက်ဆောင်ကြောင့်.
နက်ရှိုင်းသော relationally သို့သွားပါ. မေးခွန်းများကိုမေးပါ. ဂရုတစိုက် Listen နှင့်လူများရဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနှင့်အတူစာနာ. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါတယ်တစ်ခုခု၏သံသယနေရင်တောင်, ပွီးကိုရှေ့တော်၌, သူတို့ကိုနားမထောငျနှင့်နားလည်ရန်ရှာခြင်းငှါ
မတူကွဲပြားခြင်းခဲယဉ်းသည်, ကျွန်တော်တို့ပြေးပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစုအကြောင်းပြောနေတာစတင်အထူးသဖြင့်အခါ,. တချို့ကစကားပြောဆိုချက်တင်းမာနေရနိုင်. အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူလျောက်ပတ် Be. အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲအဆိုးဆုံးယူဆ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင်တော့လို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာကြံခဲ့လျှင်, မသနားတျောမူသူတို့နှင့်အတူလူနာဖြစ်. သူတို့ကကြိုးစားနေ. မြို့ရိုးကိုထည့်သွင်းနှင့်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလူပိုမိုနီးကပ်စွာရနားလည်ရန်အဘို့အလုပ်မနေပါနဲ့. ဒါဟာနှစ်ဦး-လမ်းလမ်းဖွင့်.
တစ်စုံတစ်ဦးကနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာကြံတဲ့အခါမှာ, မေးခွန်းများကိုမေးရန်မကြောက်သို့မဟုတ်အမှားတစ်ခုခုမဆို. သင်သည်သင်၏စကားသည်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သင့်, သင်မူကားအန္တရာယ်များကိုယူနှင့်သင်၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မသနားတျောမူပါရန်မျှော်လင့်ထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
က hard င်သောအခါတက်မပေးပါဘူး. ဒါကအစားစုစည်းမတူကွဲပြားမှုတစ်ခုမျှသာဒဏ်ခံမတူကွဲပြားမှုမှဦးဆောင်.
6. သင်သည်အခြားလူမျိုး / အသက်အရွယ် / လူမှုစီးပွားအုပ်စုများနှင့် ပတ်သက်. ယူဆချက်ရှိပါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ.
ဒါကငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အားလုံးတောင်းသင့်ပါတယ်မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့. ပိုပြီးသမ္မာကျမ်းစာ / မျှမျှတတစဉ်းစားရန်အလုပ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ထက်ကွဲပြားခြားနားသောလူကိုစဉ်းစားလမ်းကိုမေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်, ကွဲပြားခြားနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမျိုးစုအပါအဝင်. သင်သည်အဘယ်သို့လမ်းပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုလွန်လာသောအခါစိတ်ထဲကြွလာ? သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုင်၌သူတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်ထဲကြွလာ? ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မေးခွန်းထုတ်နှင့်လူများဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုရှုမြင်လမ်းကိုကြည့်ဖို့ကွိုးစားသငျ့.
7. သွားစကားလက်ဆုံ Keep.
ဤသည်အများအပြားပြောဆိုမှုများတယောက်ဖြစ်သင့်. ဒါဟာမဆိုနည်းလမ်းဖြင့်ပြည့်စုံသောဆွေးနွေးမှုမဖြစ်. ဤသည်အခြားဆွေးနွေးမှုများစတင်ရန်ဖို့ရည်ရွယ်သည်. မတူကွဲပြားမှုအတွက်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးမတော်တဆမှုအပေါ်ဖြစ်ပျက်မပါဘူး. ငါတို့သည်လည်းအကြောင်းပြောဆိုဘယ်တော့မှလျှင်, ကျနော်တို့သတိပြုမိဖြစ်ကြောင့်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်. Share ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ရုန်းကန်မှုများ, ဒါပေမယ့်အလုပ်သမားသငျသညျကရုဏာနှင့်ဤစကားဝိုင်းများရှိသေချာစေရန်, အာရုံများကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း, ကြေးဇူး, နှင့်ချစ်ခြင်း.
ကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆိုမထားဘူးဆိုရင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာပြီးသားအတိတ်ကာလနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်းယူဆဆက်လက်၏စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ပြေး. ထိုအပြဿနာတွေရှိပါတယ်အခါ,, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သတိမထားမိနေ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမျတျော၌လျှပ်စစ်ပြဿနာတွေနဲ့တူရဲ့. သငျသညျမီးမှတနေ့နိုးထနိုင်! ကျနော်တို့ကောင်းစွာစစ်တိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်.
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုဘုရားသခငျအဘို့ငါတို့စိတ်အားထက်သန်ကြီးထွားမယ်လို့ဆုတောငျးသငျ့. ကျနော်တို့သဘောတညီတည်းရှိသည်ဖို့မှာထားတော်မူပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်တဦးတည်းအနေဖြင့်သောအဖြစ်မှန်နားလည်သဘောပေါက်ရန်မှာထားတော်မူပါတယ်. ဒါကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေတဲ့အယူအဆမဟုတ်ပါ. ဧဖက်မှာကြည့်ပါ 4. ကမ်ဘာ​​ဥ​​ီးအတွက်အာဗြဟံအားဘုရားသခငျ၏တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကတိတော်များကိုကြည့်ပါ. ကအားလုံးကိုဗြာအတွက်အဆုံးသတ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ပါ. တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်သည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီလိုမျိုးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပေးလိမ့်မည်ဟုဆုတောင်းပဌနာ.
ဒါပေမဲ့, ကျွန်တော်တို့ပြီးသားအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောပါတယ်င့်အဖြစ်, သာဧဝံဂေလိတရားကိုယဇ်ပူဇော်မေတ္တာနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
ကျနော်တို့မြင်ရဖို့ကမ္ဘာကြီးအတွက် display ကိုပေါ်မှာဤဧဝံဂေလိတရားထားရန်လုပ်အားပေးချင်တယ်.
အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးကွဲပြားပုံရသည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်အချိန်အတွက်, သခင်ဘုရားသည်ဤသုံးနိုငျသ. ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်လုံလောက်. တဖန်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားသခင်သည်မိမိ Word ကိုလွင်ပြင်ဖြစ်စေအသုံးပြုသည်သရုပ်ဖော်ပုံကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. သူကသူ့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုတောက်ပထွန်းလင်းစေကိုအသုံးပြုသည်တစ်ခုမှာ.
ဒါကပိုမိုနက်ရှိုင်း, truer စည်းလုံးညီညွတ်ရေး.
မိုက်ကယ် • ဧပြီလ 9, 2015 တွင် 11:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤနေရာတွင်အချို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတှေး. ကြှနျုပျကမကျြနှာဖွူပါ, ဒါပေမယ့်အထက်တန်းကျောင်း သွား. အားလုံးနီးပါးအနက်ရောင်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူဘောလုံးကစား. ဒါကြောင့်, ငါသည်ငါ့အထက်တန်းကျောင်းမှာလူနည်းစုအတွက်ကျိန်းသေခဲ့သည် (နှင့်ဝေးနေဖြင့် Locker-ခန်းထဲမှာ). အဆိုပါ Arkansas ပြည်နယ်-Missisippi မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တက်ကြီးထွားလာ, ပြိုင်ပွဲတင်းမာမှုများခဲ့ကြသည် (နှင့်နေဆဲ) မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ right. သင်သည်အမြဲတစေအခြားအကြောင်းကိုနှစ်ဖက်စလုံးကနေအနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်များကိုနားထောငျ. ဒါဟာဝမ်းနည်းင်. အဘယ်အရာကိုခက်ခဲတဲ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြိုင်ပွဲထွက်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲအားဖြင့်ဝိုင်းပယ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်. ငါကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအတွင်းရုပ်ဆိုးခေါင်းကိုဖွင့်ပုံကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနိုင်နောက်ဘက်ပထမဦးဆုံးလက်မြင်ကြပြီ. ဒါဟာရွားလှရဲ့. ငါသည်သင်တို့နှင့်တူယောက်ျားတွေများအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို, တစ်ဦးယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား-based ရှုထောင့်ကနေသောဤကိစ္စများပါထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်ဆန္ဒရှိနေသော. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုကိုချစ်မှခေါ်တော်မူကြသည်, နေပါစေငါတို့ညီဖြစ်ဖြစ်ပျက်အသားအရေအရောင်. ငါ Multi-လူမျိုးရေးအသင်းတော်များမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အနှံ့တည်ရှိသောနေ့အဘို့အတောငျ့. ဒါပေမဲ့, ကျနော်တို့အဲဒီမှာရရှိမည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုထုတ်အသက်ရှင်ရန်ရှာကြံခြင်းနှင့်အကြောင်းအမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်.
ရော်ဘင် • ဧပြီလ 9, 2015 တွင် 3:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဲဒါကိုကြိုက်တယ်, ခရီးစဉ်ကို! ငါမကြာသေးမီကလူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးစက်ဝိုင်းဦးဆောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သင့်စာဖတ်သူများအချို့အခမဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းချင်ပါတယ်လျှင်, သူတို့ဒေါင်းလုပ်ရန်ဤ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
“တစ်ခန်းတည်းရှိလူမည်းများနှင့်လူဖြူမဟုတ်ရုံ, တူညီတဲ့မိသားစုထဲမှာပေမယ့်လူမည်းများနှင့်လူဖြူ။” အာမင်!
KwasiAgbottah • ဧပြီလ 9, 2015 တွင် 3:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သိပ်ကောင်းတယ်. ဒါကြောင့်လိုအပ်. ဒီတော့အထောကျအကူ. ငါသည်ဤအမှုအရာလျှောက်ထားကြလိမ့်မည်. ကြေးဇူးတငျစကား.
Rolfstlund • ဧပြီလ 10, 2015 တွင် 6:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မရှေ့မှာကဆိုပါတယ်င့် – ခရီးစဉ် Lee ကတစ်ကယ့်ကိုအကောင်းတရားဟောဆရာသည်နှင့်တစ်ဦးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး၌ပြုပါ, ရိုးရှင်းပြီးစစ်မှန်သောလမ်း …. မင်္ဂလာ !!!
Damien • ဧပြီလ 30, 2015 တွင် 4:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Otis • ဇွန်လ 27, 2015 တွင် 8:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယနေ့တွင်ဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာအပေါ်မှာငါ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည်. ငါ Lecrae မှတဆင့် 3years လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုခရီးစဉ် lee ဂီတအောက်ပါပြီ. ငါသည်သူ၏ဘဝအတှကျဘုရားသခငျကိုကြေးဇူးတငျနှင့်ကိုယ်တကယ်ဒီသွန်သင်ချက်တွေကိုခံစားခဲ့ကြ. ငါရှိရာဂါနာမှာနေထိုင် 99% ကျွန်တော်တို့လူမည်းများမှာဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာလူမျိုးရေးပိုဖြစ်ပါတယ်။(အဆိုပါခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဂါနာမကတိုင်းရင်းသားစစ်ပွဲများသော်လည်း။) ငါအခြို့အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်ကိုဆိုလို ” မှန်ကန်သောကလူ”. ငါသည်ငါ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်သောဤသင်ကြားရေးကနေ alot သင်ယူခဲ့ကြ. သငျသညျ trip နှင့်သင်၌ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
အမည် • ဒီဇင်ဘာလ 14, 2016 တွင် 3:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါ, ရှာဖွေနေမိတျဆှေ !
Lacey • မေ 14, 2017 တွင် 10:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစဉ်အမြဲငါဤကဲ့သို့သော post ကိုများအတွက် looknig ခဲ့တာ (နှင့်တစ်နေ့)
Mwiza • ဇန္နဝါရီလ 1, 2017 တွင် 2:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်သင်ကြားရေးခရီးစဉ်. ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်. (ဇမ်ဘီယာ)
Olivia • ဇွန်လ 18, 2018 တွင် 12:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤစကားပြောဆိုမှုနှင့်သင်ကြားရေးကိုချစ်. ကိုယ့်ကိုငါ့သားသမီးသုံးဦးနှင့်အတူအလားတူစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့. ကျနော်တို့သခင်ယေရှုကဲ့သို့ချစ်ရမည်ကိုဘယ်လိုအားဖြည့်ရန်ဤဆောင်းပါးကိုအသုံးပြုပြီးပါလိမ့်မည်. ကျွန်မခရီးစဉ်ဧဝံဂေလိတရားကိုထွက်အသကျရှငျနဲ့အတူတူလုပ်ဖို့အခြားသူတွေဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်. သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.